Ogaden News Agency (ONA) – Kumanaan Muslimiin ah oo shalay isugu soo baxay Addisababa iyo filim laga soo duubay
Kumanaan Muslimiin ah oo shalay isugu soo baxay Addisababa iyo filim laga soo duubay
Posted by ONA Admin	/ January 5, 2013
JZN- Waxaa soo cusboonaaday banaanbaxyadii ay muslimiinta ku nool Addisababa iyo degmooyinka ku dhow isugu soo baxayeen Jimca walba. Waxaa Jimcihii shalay ahaa Halkudhig u ahaa banaanbaxa – 360 Maalmood Xoriyad Darteed – oo xukuumadda lagagga dalbanayay inay ogolaato xoriyadda diimaha soona dayso culumada u xidhan.
Waxaa kaloo ay codsanayeen banaanabaxa-yaasha in la soo daayo aqoon-yahanka iyo culuamada ay doorteen muslimiinta ee sida xaqdarada ah ay xukuumadda u xidhay. Haya’ada badan oo muslimiinta ah ayaa xukuumadda Itobiya ku eedeeyay inay qaanuunka ay ugu magacdareen la-dagaalanka argagixisada loo adeegsanayo dadka muslimiinta ah si xabsiga looga buuxiyo. Sidoo kale ayay haya’ado caalami ah oo u dooda xuquuqda aadanaha uga codsadeen xukuumadda Itobiya inay dadka sida xaqdarada ah ugu xidhan soo daayaan isla markaana ay Itobiya ixtiraamto xuquuqda Insaanka iyo xoriyadda diimaha.
Guddi ka socda Mareykanka oo arimaha la xidhiidha xoriyadda diimaha ayaa ku eedeeyay Itobiya inay cadaadis iyo cabudhin ka hayaan dadka muslimiinta ah eek u nool Itobiya oy ku tilmaameen inay ku yihiin Itobiya aqliya laga tira badan yahay, taasoo ah sheegashada Itobiya oon ogolayn in tirakoob dhab ah lagu sameeyo dadka Itobiya ku nool iyo cadadka diimaha ay kala aaminsan yihiin. Itobiya ayaa caalamka reer Galbeedka gaar ahaan kaga qaraabata inay tahay dawlad Masiixi ah oo aqliyad muslimiin ah (38%) ay dhex dagan tahay, si loo ilaaliyo jiritaankeeda.
Dadka muslimiinta ah e banaanbaxaya ayaa ku eedeynaya xukuumadda inay faragalin ku hayso haya’adda ugu sareysa ee loo yaqaano – Golaha Sare ee Arimaha Muslimiinta المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – taasoo keentay inay kumnaan muslimiin ah banaabaxyo sanadkii tagay ay ka dhigaan Adisababa iyo gobolo kale oo ka mid ah dalkaa.
Mucaaradka Itobiya ayaa ugu baaqay dadka masiixiga ah inay banaabaxyada ka qaybgalaan oo beenta xukuumadda Itobiya aanay u dhg raaricinin. Waxay xukuumadda Itobiya maalmahanba waday riwaayad ah inay qabatay dhalinyaro ay Shabaabka Somaaliya u soo direen Itobiya. Ujeedada ka dambaysa arintan sida ay sheegayaan mucaaradkaa ayaa ah inay banaabaxyada ka socda Adisababa laga dhigo inay ka dambeeyaan dad dalka dibadiisa ka yimid oon Itobiyaan ahayn. Sanadkan ayaa lagu wadaa inuu noqdo sanad isbadala xoogan ay ka dhici doonaan Itoobiya.
Halkan ka daawo banaanbixii shalay ka dhacay Addisababa.